Blog – Page2– T-WORK SYSTEM
ကုန်ပစ္စည်းအသစ် ၁ခု ထုတ်ပြီဆိုရင် သမာရိုးကျနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ သတင်းစာတွေ TV တွေ Billboard တွေမှာ ကြော်ငြာခြင်းက ကုန်ကျစရိတ်များမယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်မှာပါFlyerဝေမယ်ဆိုရင်လည်း ရသွားတဲ့လူတွေက ကိုယ့်ရဲ့Productနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်Targetထားတဲ့ Customerတွေဆီ Product Information တွေကို ထိထိရောက်ရောက် ကြော်ငြာနိုင်ဖို့ဆိုရင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုကြမလဲ❓…
Website Hosting ဝယ်ယူပြီး Domain Nameတခု အခမဲ့ အပြင် လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်သော Customize Templates များ ရယူကြရအောင် ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်သော စိတ်ကြိုက် Web Template များ အလွယ်တကူ ထည့်နိုင်/ဖျက်လို့ရသော Modules များ ဖြင့် Facebook မှာ post…
လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းအတွက် Websiteများကို လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်ပါပြီ ယနေ့ခေတ်မှာ Website ဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ အရာတခု ဖြစ်နေပါပြီ အဲ့လိုWebsiteမျိူးကို ဘယ်လို ဖန်တီးနိုင်မလဲ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးအတွက် Web Templatesများစွာ ဖန်တီးပေးထားတာမို့ လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်သော စိတ်ကြိုက် Web…
Social Media ပေါ်ကနေပြီ Digital Marketing, Online Marketing , Digital Branding, E-Mail Marketing တွေပြုလုပ်လို့ရနေပြီ။ Website ဘာလို့လိုအပ်နေသေးတာလဲ ??? မည့်သည့် Social Media Platform ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ပိုင် Platform တစ်ခုကတော့အပ်ပါသည်။ ခိုင်မာသေချာသည့်…
Social Media ပေါ်ကနေပြီ Digital Marketing, Online Marketing , Digital Branding, E-Mail Marketing တွေပြုလုပ်လို့ရနေပြီ။ Website ဘာလို့လိုအပ်နေသေးတာလဲ ??? မည့်သည့် Social Media Platform ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ပိုင် Platform တစ်ခုကတော့ လိုအပ်ပါသည်။…
အခုလို IT ခေတ်ကြီးမှာ စာအုပ်တွေ ထက် ဖုန်းတွေက အသုံးများလာပီနော် 📘 📲 Catalog Book တွေသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း စာအုပ်ရဲ့အရွယ်အစားကြီးလာတာနုဲ့အမျှ သယ်ဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။ ဒါကြောင့် စိတ်ကူးမိကြဖူးမှာပေါ့။ စာအုပ်ကြီးကို ဖုန်းထဲထည့်ယူသွားလို့ရရင် ကောင်းမှာပဲလို့။ ကဲ စိတ်ကူးလေးတွေ အမှန်အကန်ဖြစ်လာပါပြီနော်။ 💯💯 Catalog App…
ရောင်းချမယ့် ကုန်တွေရှိပြီး ဆိုင်ခန်းစရိတ်အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါသလား😔 ဒါဆိုရင်တော့ ၁နှစ်ပတ်လုံးမှ 120,000 ကျပ်သာ ကျသင့်မယ့် Online Website👨‍💻 တခု တည်ဆောက်လိုက်ပါ ဝန်ထမ်းခ💰လည်း မကုန်တော့ဘူး မီတာခဘာညာ အထွေထွေစရိတ်တွေ📜လည်း ကုန်စရာမလိုတော့ဘူးနော် 120,000 ကျပ်တည်းမို့ အထင်တော့ မသေးလိုက်နဲ့ဦး🤗 Securityလည်း အပြည့်အ၀…
ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် #Website 🌐🌐🌐 တစ်ခု လုပ်ချင်တယ်။ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းသုံး #E-Mail 📩📩📩 လည်းသုံးချင်တယ်။ကုန်ကျစရိတ်အများကြီးလည်း မသုံးချင်သေးဘူး။💸💸💸 ဒါပေမဲ့ ဈေးပေါတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အရာတွေကဲ့သို့ မိမိ Website မှာလည်း ခဏခဏ Errorဖြစ်လိုက်, မကြာမကြာ Site Down သွားလိုက် ဖြစ်နေတဲ့…